काठमाडौंबाट धनगढी हिँडेकी महिलाको ह्याण्डब्याग खोलेर हेर्दा प्रहरी नै भए चकित ! - Taja Report
Homeसमाचारकाठमाडौंबाट धनगढी हिँडेकी महिलाको ह्याण्डब्याग खोलेर हेर्दा प्रहरी नै भए चकित !
June 26, 2018 समाचार Comments Off on काठमाडौंबाट धनगढी हिँडेकी महिलाको ह्याण्डब्याग खोलेर हेर्दा प्रहरी नै भए चकित !
बर्दिया। काठमाडौंबाट धनगढी हिँडेकी एक महिलाको ह्याण्डब्यागले प्रहरीलाई नै चकित पारिदिएको छ ।
रुकुम जिल्ला काक्री–६ बस्ने ३० बर्षीया पवित्रा पुनलाई प्रहरीले अवैध लागू औषध चरेश १० के.जी. सहित पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौंबाट धनगढीतर्फ जाँदै गरेको ना.४ ख ५८७४ नम्बरको बसलाई आइतबार ठाकुरबाबा नगरपालिका–३ आमबासा स्थित नेपाली सेनाको चेक पोइन्टमा चेकजाँच गर्दा पुनको झोला र हेण्ड ब्यागबाट उक्त चरेश बरामद भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बगनाहाबाट खटिएको प्रहरीले पुनलाई पक्राउ गरेको हो ।
यता, अन्तरार्ष्ट्रिय करिअरको उत्तरार्धमा रहेका ३३ वर्षिय रोनाल्डोले पनि याे विश्वकप आफ्ना लागि अन्तिम अवसर भएको राम्ररी बुझेका छन्। त्यही कारण पाएका कुनै पनि मौका नगुमाइकन उनी करिअरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब अन्तिम प्रश्न मात्र बाँकी छ, के ३० वर्षिय मेस्सीले आफ्नो जादु फेरि देखाउँदै अर्जेन्टिनालाई अन्तिम खेलमा उकास्न सक्लान् त? नेपाल खबरबाट
राशीबाट पत्ता लगाउनुस् कुन राशी को मान्छे कस्तो , मन कस्तो!